Ala Shutter Door, Rolling Door, Smart ala Shutter - Gemcharm
Ningbo Gemcharm Mechanical & Ọdụdọ Tech Co., Ltd. bụ otutu enterprise tụnyere R & D, mmepụta na ahịa. Mmepụta nke inyefe shutter ụzọ na mepụtara anyị ụlọ ọrụ bụ ngwaọrụ nke nwere ọgụgụ isi n'ichepụta na ọgụgụ isi ụlọ ojiji, na Gemcharm bụ kwara azụmahịa nkà ihe ọmụma nke "Iji mee ka uru maka enterprise, kee uru maka ọrụ, ma na- maka na otu ".Anyi na-aga ike ọhụrụ mgbukepụ na imeta a ọhụrụ nrọ.
The n'ala itunanya
"Iguzosi ike n'ezi na-edebere, teknuzu na-edu ndú, magburu onwe ya mma, na ọrụ kasị" Na-shap ...
Side arịọnụ efere 2
Ọ e mere maka inyịme ọrụ, nke na-enye oghere na mmechi, ọkụ akara, sel ...
Side arịọnụ efere
Maka ojiji nke oru igbe. "Iguzosi ike n'ezi na-edebere, teknuzu na-edu ndú, magburu onwe ya mma, ...
"Iguzosi ike n'ezi na-edebere, teknuzu na-edu ndú, magburu onwe ya mma, na ọrụ kasị" Dị ka onye na ...
ekwentị: +86 057488187776
"Iguzosi ike n'ezi na-edebere, teknuzu na-edu ndú, magburu onwe ya mma, na ọrụ kasị" Dị ka a nchekwa ngwaọrụ nke moto, ọ nwere ike inye nchekwa nchebe maka ndị mmadụ na ihe mgbochi mgbe ha na-agafe n'okpuru ụzọ. Ọ chọrọ ịdị na-akwado nke a set nke eletriki akara system.It nwere ike inye infrared ray ịchọpụta ihe mgbochi n'okpuru ibo ụzọ, na-akwụsị ma laa azu gaba n'iru iji hụ na nchekwa nke ụzọ, ahụ mgbe ọ na-akwali ala. (E na-adịghị ahụ anya ìhè, dabeere na Mankeumman Safety nkọwapụta Test Standard nke United States)
Ihe echiche Kpọtụrụ UGBU A
Single isi ọnọdụ, na onwe-mmụta ọrụ na ọhụrụ anya, na-emepụta site na mkpa film, ọ dị mfe iji rụọ ọrụ .A na Adabara iji n'ụlọ. "Iguzosi ike n'ezi na-edebere, teknuzu na-edu ndú, magburu onwe ya mma, na ọrụ elu"
"Iguzosi ike n'ezi na-edebere, teknuzu na-edu ndú, magburu onwe ya mma, na ọrụ kasị" Dị ka a nchekwa ngwaọrụ nke moto, ọ nwere ike inye nchekwa nchebe maka ndị mmadụ na ihe mgbochi mgbe ha na-agafe n'okpuru ụzọ. Ọ chọrọ ịdị na-akwado nke a set nke eletriki akara system.It nwere ike inye infrared ray ịchọpụta ihe mgbochi n'okpuru ibo ụzọ, na-akwụsị ma laa azu gaba n'iru iji hụ na nchekwa nke ụzọ, ahụ mgbe ọ na-akwali ala. (E na-adịghị ahụ anya ìhè, dabeere na Mankeumman Safety nkọwapụta Test Standard nke United States).
Muti-ọrụ mgbidi mgba ọkụ
Ọ e mere maka inyịme ọrụ, nke na-enye oghere na mmechi, ọkụ akara, onwe-kpochidoro nchebe na ventilashion oghere na ndị ọzọ ọrụ.
Dị ka European-style mgbidi mgba ọkụ size imewe, na akara na anụ ụlọ nkịtị akụkụ. Two-isi waya echichi, mfe ma adaba.
Ka akpaka ákwà mgbochi ụzọ moto ime akara mgba ọkụ, nke kwesịrị ịdị na-akwado anyị ụlọ ọrụ ime akara encode na-arụ ọrụ,
adabara a na nso nke ime akara ngwa (dị ka mba ụkpụrụ nke obodo radio moto ike ojiji).
E Bike Scooter, Self-propelled igwe eji asụ ahịhịa , E Scooter, electric skuuta,